Maitiro ekugadzirisa laptop-mode-zvishandiso | Kubva kuLinux
Maitiro ekugadzirisa laptop-mode-zvishandiso
Latop-mode-maturusi chishandiso chine simba kwazvo kuchengetedza simba uye kuwedzera hupenyu hwebhatiri. Nekudaro, kuuya ne "hasha" kumisikidza nekutadza kunogona kutenderana nezvinodiwa nemunhu wese.
En Arch uye zvigadzirwa:
sudo pacman -S laptop-mode-maturusi
En Debian / Ubuntu uye zvigadzirwa:
sudo apt-tora kuisa laptop-mode-maturusi
MukuvhuraSUSE uye zvigadzirwa:
zypper gadza laptop-modhi-maturusi
Pano ndiri kuzokuratidza zvimwe zvinogona kugadzirisa shanduko, kunyange paine zvimwe zvakawanda.
Nzira yekudzivirira mbeva kuti irege kurara
Nokusingaperi, laptop-modhi-maturusi akagadziriswa nenzira yekuti madhiraivhu ese e USB apinde munzira yekurara kana laptop yabviswa pasimba.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukarega kushandisa mbeva kwemasekondi mashoma uye uchida kuishandisa zvakare, zvinotora nguva kupindura. Iwe unogona kusatokwanisa "kuimutsiridza" iyo.
Kuti udzivise hunhu uhu, ingo gadzira faira rekumisikidza. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva iyo mbeva ID. Kuti uite izvi, zvibvise uye wozvibatanidza zvakare. Ipapo, ndakavhura terminal ndokunyora kuti:
Panopera zvese, mutsetse wakafanana neinotevera unofanira kuoneka:
[13634.540582] akaviga-generic 0003: 046D: C052.0005: kuisa, hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] pane usb-0000: 00: 1a.0-1.2 / input0
Mune ino kesi, mbeva IDE ndeye: 046D: C052
Zvino, ingo gadzirisa iyo laptop-mode-zvishandiso yekumisikidza faira iyo inodzora iyo auto-kumisa yeUS USB zvishandiso:
Tsvaga mutsara unoti AUTOSUSPEND_USBID_BLACKLIST wobva wawedzera mbeva ID. Kutevedzera muenzaniso wedu, inofanira kutaridzika seiyi:
Nzira yekudzivirira sei disc kubva "kudzima" uye "kuvhura" nguva dzese
Kana dhisiki rako richiita ruzha rwakafanana chaizvo ne "bhatani" pese paunoita chiito zvakare mushure memasekondi mashoma ekusaita, ipapo laptop-modhi-maturusi ari kushandisa hdparm kuiisa pakurara, nokudaro ichiita simba rakakosha kuchengetedza.
Nekudaro, hunhu uhwu hunogona kutsamwisa uye vamwe vanogona kufunga kuti "hwakanyanya." Mumwe munhu angatopokana kuti, nekufamba kwenguva, iro hard drive rinogona kukanganiswa. Kutendeseka, ini handizive kana ichi chiri chokwadi asi ini ndaishungurudzwa neruzha uye nenyaya yekuti paive nekumwe kunonoka kudzamara album yatangazve uye zvese zvakashanda sezvazvaifanira.
Kuti udzikise hutsinye hwehpparm, ingo gadzirisa inoenderana faira yekumisikidza:
Tarisa mutsara unoti: BATT_HD_POWERMGMT = 1
Uye chinja iyo yakapihwa kukosha neimwe pakati pe1 kusvika 254, iine 1 iriyo ine hukasha mode uye 254 isinganetsi. Ndakaipa 128 uye iri kufamba zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekugadzirisa laptop-mode-zvishandiso
shit iyo application, ndine hurombo nesencibles, ndave kuda kumomesa muchina nekuti ini handina kumbobvira ndangotanga muchina wangu mushure mekuisa iyi application, ndinovimba havaite chikanganiso chimwe chete
HacKan & CuBa co. akadaro
Pinda kugadzirisa mamiriro uye uninstall: S.
Sezvandisati ndamboona kuti muchina hautangi nekuda kweiyi app
Pindura HacKan & CuBa co.
Chii chaitika? Imhosva ipi yawakakanda?
Ndiri kuishandisa pasina matambudziko (muManjaro, Crunchbang uye Arch)
Izvo zvinowanzozivikanwa seRukanda 8 Kukanganisa
Pindura kuna Esomismo
Iwe uri maju akakura kwazvo, maju, majusi… Asi pamwe ini handizive kuti chii OSI modhi, zvikasadaro iyo joke haina kunaka.
ja ndangotanga ccna uye izvi zvandaisanzwisisa izvozvi zvinoita kuti ndinyemwerere .. .. ruzivo runokwevera nyemwerero ...
Ndatenda shamwari nerubatsiro rwako rwakandishandira uye kana ndikabvisa iyo lapop-mode-maturusi kwandinoona sarudzo iyoyo, ndashandisa akawanda madhiri anoenderana ne. ikozvino uye ndinonzwa ndakarasika ndoisa sei ini .deb kana pane chishandiso chekuchinja kubva .deb kuenda tar.gz kana chimwe chinhu chakadai, semuenzaniso ini ndoda kuisa grooveoff inova kurodha mimhanzi unoziva chimwe chinhu chakafanana iyo mu manjaro, ndatenda nerubatsiro rwako nekwaziso kubva kuLima Peru
Kutenda neichi chakanakisa posvo.
Ndiri kunetseka nekuchengetedza simba, ndinokwanisa kusvika kumutsetse wekuraira, ini ndinopinda iyo id id, asi dambudziko nderekuti ndinofanira kuvhara kurekodha iyo data.
Mhoro Juan Antonio, nderipi gadziriso remavara rauri kushandisa?
kana ukashandisa «vi» zvingave zviri: w kuchengetedza shanduko pamwe nano (ctrl O) kana (Ctrl X wobva wadzvanya Y)
Pindura kuna kodenix
Ndatenda zvikuru nerubatsiro! zvese zvinoshanda zvakakwana (ubuntu 14.04). 🙂
Pindura kuna Falc
Nezve dhisiki kukuvara kunokonzerwa neLMT ndinotya kutaura kuti ichokwadi, ndakaidzidza nenzira inorwadza, vamwe vangu vashandisi veLinux. Ndakaiisa uye handina kuimisa kuti ive isina hasha, pane yangu Dell laptop ine samsung 320gb diski, payakabviswa pasimba, yakaita kurira kunge dhisiki raizodzima rovhurika nekukasira. Nekukanganisa ini handina basa nazvo uye mushure memavhiki maviri zvikanganiso zvakatanga kuoneka nekuda kwekushayikwa kwemafaira uye mafaera iwayo akatsakatika nekuti paive nezvikamu zvakashata pane diski. Ndakaedza kuigadzirisa nemidziyo yakati wandei asi haina kubudirira, kukuvara kwanga kuri kwemuviri uye kusingagadzirisike, saka ndaifanirwa kukamura chidimbu chakaremara (20 Gb).
Ipapo ndakanzwisisa kuti aya magetsi akadzima e diski chavanoita ndechekuti inomira kurekodha kana kuverenga musoro nekukasira, ipapo kune zvikamu zvisina magineti kana magineti asina kunaka, zvinovashatisa.
Enrique Aguilar chinobata mufananidzo akadaro
Akange asina kuziva kuti chii chaiitika ne "mbeva" kweinopfuura gore, akange ave kuda kuikanda nepahwindo. Maitiro acho akajeka uye akapusa, zvirinani zvaparadzwa. Iye zvino ndinofanira kuongorora mabhenefiti edmesg uye dzese sarudzo dzelaptop-mode-maturusi.
Ndinokutendai zvikuru nekutungamira uye kwaziso kubva kuSanta Ana, El Salvador.
Pindura Enrique Aguilar
Bhuku "gvSIG: gwara redzidzo yekuzvimiririra"